तपाईँको आँखामा कचेरा लाग्छ ? कारण यस्तो छ | Nepali Health
२०७४ वैशाख ३ गते ८:२६ मा प्रकाशित
एजेन्सी । विहान उठ्ने वित्तिकै हामी मुख धुन्छौँ अनि फ्रेस हुन्छौँ । मुख धुने क्रममा सबैभन्दा बढी पानी आँखामा फाल्छौँ । यसरी आँखामा बढी पानी फाल्नु निन्द्राको ह्याङ फाल्न मात्रै होइन आँखा सफा होस भन्नका लागि पनि हो ।
आँखामा लाग्ने कचेरा के हो ?
कचेरा आँखाबाट निस्केको आँशु धुलो, फोहर र आँखाको ढकनीमा मरेका कोषहरु मिलेर बनेको हुन्छ । प्लीका सेमी लुनारिस नामक आँखाको भागले हर समय कचेरा बनाउने तरल पदार्थ (आँशु) निकालिरहेको हुन्छ । तर आँखा झिमझिम गर्दा यो जम्मा हुन नपाई पखालिन्छ ।
तर जब हामी सुतेका हुन्छौँ, आँखा झिम झिम हुदैन् र यो तरल पदार्थ आँखाको कुनामा जम्मा भई जम्न पुग्दछ । बाहिरको धुलो, फोहर र मरेको कोषले यसलाई जम्न अझ मद्दत गर्छ । जसबाट हरेक दिन विहान उठ्दा आँखामा कचेरा देखिन्छ ।
हरेक व्यक्तिमा प्लीका सेमीलुनारीसले फरकफरक मात्राको तरल निकाल्ने हुँदा कचेराको मात्रा पनि व्यक्तिपिच्छे फरक फरक हुन्छ ।